Mareykanka: Soomaalida oo lagu waayay eedeyn ah inay dhaceen 100 milyon $. - NorSom News
Mareykanka: Soomaalida oo lagu waayay eedeyn ah inay dhaceen 100 milyon $.
Gudi uu baarlamaanka gobolka Minnesota u saaray eedeymo qaar ka mid ah warbaahinta Maraykanka ay u jeedisay Soomaalida ku dhaqan dalkaas ayaa noqday kuwo aan ku taagneyn sal adag.
Soomaalida Minnesota ayaa lagu eedeeyay inay dowladda ka lunsadeen lacag dhan $100 milyan oo doolar, kadibna lacagahaas lagu maalgaliyay kooxaga argagaxisada ah, sida Alshabaab. Waxaana hada eedeyntaas loo waayay wax cadeyn oo muujineyso jiritaankeeda.
Mahad Xassan oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida ayaa warbaahinta u sheegay:
“Waxaa soo baxday in Soomaalida aysan lacag argagixiso u dirin, in lacagta boqol milyan ay ahayd been abuur, waxaa kale oo jirta in wax siyaasiyiin ah oo dhankaas naga caawiyay uusan jirin” ayuu yiri Mahad.
Warbixinta oo ka koobnayd 69 bog oo baarlamaanka la horkeenay ayaa dhanka kale lagu sheegay in ay maqantahay lacag dhan 6 milyan oo doolar, hase yeeshee Mahad waxa uu sheegayaa in lacagtaas aysan Soomaali oo kaliya ku maqnayn.
Previous articleR.W Norway oo cambaareysay weerarkii masaajidada iyo Donald Trump oo wali aamusan.
Next articleQaabkan ayay madaxda caalamku uga fal celiyeen weeraradii argagaxiso ee New Zealand.